Miniature Circuit emebi (MCB) Manufacturers & Suppliers - China Miniature Circuit emebi (MCB) Factory
DAB7-63 Nova Series Miniature Circuit emebi (MCB)
Obere ihe eji egwu mmiriDAB7-63Hare ezubere maka ịnye ike isi iyi na-enweghị ike n'okpuru oke mmiri.
Ihe 64 n’otu elekere asatọ sitere na 6 ruo 63 A. E nwetala MCB a ASTA, SEMKO, CB, CE certificate.
DAB6 Series Miniature Circuit emebi (MCB)
Ebumnuche DAB6-63 maka ichedo nkesa na usoro otu nwere ibu dị iche iche:
- ngwa eletriki, ọkụ - V njirimara mgba ọkụ;
- draịva nwere oke mmiri na-amalite (compressor, fan fan) - C njirimara switches;
- draịva nwere oke ebido (usoro ndoli, nfuli) - D njirimara mgbanwe;
A na-atụ aro DAB6-63 dị obere maka ndị na-ekesa eletriki nke ụlọ na ụlọ ọha.
DAB7N-40 Series DPN Miniature Circuit emebi (MCB)
DAB7N-40 Series miniature breaker adopts okpukpu abụọ-agbaji ebe nke 1P + N, abụọ okporo osisi na-gwara mmanụ na dịpụrụ adịpụ site na onye ọ bụla ọzọ, n'okpuru synchronous ọrụ, N-osisi mgbe niile ga-eme mbụ na-agbaji mgbe e mesịrị, nke na-ekwe nkwa eletriki aak agbaji ikike nke osisi echekwara, na-ahụkwa nchekwa nke sekit na-achịkwa na akụrụngwa eletriki.
Ngwa DAB6-100 bụ njirimara ndị dị ka ọdịdị dị nro, ịdị nro dị mfe, arụmọrụ magburu onwe ya na nke a pụrụ ịdabere na ya, ikike ịgbagha dị elu, ngwangwa ngwangwa ma jiri ụgbọ okporo ígwè wụnye ya Ogige ya na ndị na-akwado ya na-anabata nnukwu ọkụ ọkụ na ike na-eguzogide ọgwụ nke ogologo oge. Ọ kachasị na-eche maka ichebe sekit nke AC 50Hz, 230V nke otu osisi, 400V nke okporo osisi abụọ ma ọ bụ atọ ma ọ bụ anọpopo site na oke ma ọ bụ obere mkpụmkpụ, yana maka ịme ihe na-enweghị isi na imebi eletrikialat na lig ...
DAB7 Series Miniature Circuit emebi (MCB)
Obere ihe mgbanaka sekit DAB7-63H ezubere iji nye ike ọkụ ọkụ na-akpaghị aka n'okpuru oke mmiri. A na-atụ aro ka ha jiri ya rụọ ọrụ na ngalaba otu (ụlọ na ala) na bọọdụ nkesa nke ụlọ obibi, ụlọ, ọha na ụlọ.
DAB7-125 Series Miniature Circuit emebi (MCB)
Maka ebumnuche ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke azụmahịa
Mkpa nkesa eletriki na-aga n'ihu na ngalaba, azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Nchekwa arụmọrụ arụmọrụ, ịga n'ihu nke ọrụ, nkasi obi dị ukwuu na ọnụ ahịa arụmọrụ ewerewo nnukwu mkpa. Obere Circuit Breakers ka emebere iji kwadobe mgbanwe ndị a.
DAB7-100 8kA MCB Switch Miniature Circuit Breaker
A na-emepe DAB7-100 obere elekere sekit ka ọ bụrụ ụkpụrụ GB 10963 na IEC60898. Ndị na-ahụ maka sekit ahụ na-anya isi nkwụsi ike, nchedo mkpirikpi, nchebe buru ibu, oge mmeghe dị mkpirikpi, na ndozi ikike dị elu dị n'otu nhazi.
A na-etinye ndị na-ahụ maka sekit ahụ maka nchebe dị ukwuu nke ndị na-ahụ maka kọntaktị, ihe ntụgharị, na ngwa eletriki ndị ọzọ.
Main ọrụ: obere sekit nchedo, bufee nchedo, na eletriki iche.
MCB N'okpuru Ntọhapụ Volta
N'okpuru ntọhapụ voltaji
Ejiri voltage bụ 230V na 400V n'otu n'otu. Nhapụ ga-agbaji onye na-agbaji sekit mgbe ezigbo voltage dị n'etiti 70% Ue-35% Ue; ntọhapụ ga-egbochi onye na-agbaji sekit emechi mgbe ezigbo voltage dị n'okpuru 35% Ue; ntọhapụ ga-emechi mmebi sekit mgbe ezigbo voltage dị n'etiti 85% Ue-110% Ue.
Mwepụta MCB Shunt
Ike njikwa akara akara gosiri (Anyị) nke DAB7-FL shunt ntọhapụ bụ AC50Hz na 24V ka 110V, 110V ruo 400V, DC 24V ka 60V, 110V ruo 220V, mgbe etinyere ọkụ ugbu a sitere na 70% Anyị na 110% Anyị, shunt ahụ ntọhapụ ga-eme ihe a pụrụ ịdabere na ya ma gbajie onye na-agbaji sekit.
C45 4P Miniature Circuit emebi
Ngwa C45 dị na akara nke AC 50Hz / 60Hz, 230V na otu osisi, 400V na okpukpu abụọ, atọ, okporo osisi maka ichebe oke ibu na obere elekere, wee gosipụta ugbu a ruo 63A. Enwekwara ike iji ya maka ntụgharị ntụgharị na-adịghị adịkarị n'okpuru ọnọdụ nkịtị. Onye na-emebi ihe bụ ọdabara usoro nkesa ọkụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mpaghara azụmahịa, ụlọ ịrị elu na ụlọ obibi. Ọ kwekọrọ na ụkpụrụ nke IEC60898. Main Technical oke Type C45 osisi 1 ...
C45 3P Miniature Circuit emebi
Ngwa C45 dị na akara nke AC 50Hz / 60Hz, 230V na otu osisi, 400V na okpukpu abụọ, atọ, okporo osisi maka ichebe oke ibu na obere elekere, wee gosipụta ugbu a ruo 63A. Enwekwara ike iji ya maka ntụgharị ntụgharị na-adịghị adịkarị n'okpuru ọnọdụ nkịtị. Onye na-emebi ihe bụ ọdabara usoro nkesa ọkụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mpaghara azụmahịa, ụlọ ịrị elu na ụlọ obibi. Ọ kwekọrọ na ụkpụrụ nke IEC60898. Main ụzụ oke Type C45 osisi 1P ...